Fihariana vaovao ny fanamboarana sakafo amin’ny alalan’ny “bambou”. Valiaha no iantsoana azy ity any Befandriana Avaratra. Nahazo fiofanana avy amin’ny ofisim-pirenena misahana ny fanjarian-tsakafo (ONN) i Josiane avy any kaominina Morafeno, distrikan’i Befandriana avaratra. Raha akora fanamboarana fanaka no ahafantaran’ny besinimaro ny valiaha dia fantatra fa fihinana ihany koa ity karazana hazo ity. Nampiranty ireo sakafo vita avy amin’ny valiaha nandritra ny foara Ankolagny andiany faha-enina tao amin’ny Stade Municipal Befandriana Avaratra ity renim-pianakaviana nahazo fiofanana ity.
Volana novambra ny fitsirian’ny valiaha ka ilay tsimoka na hovaka valiaha (pousse de bambou) iny no azo hanaovana sakafo toy ny lasary, “confiture”, tsikiry… Sasany madio ilay malemilemy amin’ny havoka valiaha. Ampangotrahina ary ariana ny ranony avy eo izay vao azo atao lasary, confiture, tsikiry…Manan-karena otrik’aina ny havoka valiaha. Nambaran’i Josiane fa mitondra angovo ho an’ny vatana ny sakafo avy amin’ny “pousse de bambou”.
‹ Programme PROSPERER rime avec Fisandratana	› TSENAN’NY LAVANILA: Nisy fihemorana ny tetiandro